श्याम श्रेष्ठ काठमाडाैं, २ जेठ
भारतले सुदूर पश्चिम नेपालको कालापानीमा खुलेआम नेपाली सीमा मिचेर हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना जबर्जस्ती राखेको ५८ वर्ष भइसक्यो ।
हालै २ नोभेम्बर, २०१९ मा उसले त्यो मिचिएको नेपाली भूमिलाई भारतीय भूमि भनेर नयाँ आधिकारिक नक्सा प्रकाशितसमेत गरिसकेको छ । हप्ता दिनअघि उसले लिपुलेकसम्म जाने कच्ची सडककै उद्घाटन गरिसकेको छ ।
भारतले गरेकोे यो सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध सारा राजनीतिक दल एकतावद्ध भएका छन् । यो घटनाबाट सारा नेपाली आक्रोशित भएका छन् । यसका विरुद्ध लकडाउनको प्रतिकूल समयमा समेत कैयन् नागरिक अगुवाहरू सडकमा छन् ।
सम्पूर्ण नेपाली मिडिया लगातार यसबारेका सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । सिंगो नेपाल फेरि एकपटक अभूतपूर्व रूपमा एकजुट भएको छ ।
यही राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएर नेपाल सरकारले यस पटक ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । यहाँबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल अविलम्ब भारतसित कुनै पनि स्तरको कूटनीतिक तहमा वार्ता चाहन्छ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने आँट गरेको छ ।
भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट नाममा विरोध पत्र दिने आँट पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले सन् १९६२ यता पहिलो पटक कालापानीको नाबीडाङभन्दा केही किलोमिटर यता छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको बीओपी पनि स्थापना गरेको छ ।
सरकारले उठाएका विरोधका स्वरहरू र विरोधमा उठाएका कदमहरू अनुचित छैनन् । तर, यति नै मलुवा कदमहरूका भरमा भारत सरकार संवादमा आउने र अतिक्रमित भूमि छोड्ने सम्भावना भने कहीँ कतै देखिँदैन ।
सरकारको काममा ठूलो असंगति देखिँदै छ । सरकार एकातिर लिम्पियाधुरा–कालापानी हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै छ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छातीमा टाँगिएको लोगोमा जुन नेपालको नक्सा छ, त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारततिरै छ ।
यहाँसम्म कि नेपालको संविधानमा जुन निशाना छापको लोगो छ, त्यसमा पनि त्यही दयनीय स्थिति छ । नेपालका सारा सरकारी कार्यालयमा त्यही त्रुटिपूर्ण नक्सा टाँगिएको छ ।
यस्तो विडम्बना आजको मितिसम्म पनि देखिएपछि नेपाल सरकारको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई भारतले कूटनीतिक तहमा गम्भीरतापूर्वक नलिनु स्वाभाविक हो ।
नेपालका कुनै उच्चपदस्थ वार्ताकार वा राजदूतले कूटनीतिक वार्ताको टेबुलमा यो कुरा राखिहाल्यो भने पनि उसले सजिलै भनिदिन सक्छ– लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तिम्रै संविधानमा र मन्त्रीहरूका छातीमा टाँगिने लोगोमा तिम्रो हुन सकेको छैन, त्यो अझै भारतकै छ । हामी तिम्रो दाबीलाई कसरी सही हो भनेर स्वीकारौँ ?
यस्तो प्रतिप्रश्न पाइएमा हामीले के जवाफ दिने ? नैतिक र कूटनैतिक रूपमा लज्जित हुनु सिबाय हामीसित गहकिलो ओजनसहित बोल्ने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन ।
त्यसैले, भारत सरकारले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो देशमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि कुनै पनि स्तरमा कूटनीतिक पहल गर्नका लागि नेपालको पहिलो प्रमुख काम हुनुपर्छ– ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको अतिक्रमित जमिन नेपालतिरै पर्ने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा अविलम्ब प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, त्यो नक्सालाई हाम्रो संविधान, लोगो र पाठ्यपुस्तक सबैतिर स्थापित गर्न थाल्नुपर्छ । नक्सामा पहिला जे गल्ती भयो त्यसलाई विगत सरकारले भारतीय दबाबमा भूलवश गरेको कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
भारतले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो नरहेको जमिन आफ्नो भनेर दाबी गर्दै विश्वसामु गलत नक्सा बेलैमा प्रस्तुत गर्न आँट गर्दा नेपालले आफ्नो जमिन आफ्नो भनेर दाबी गर्दै विश्वसामु समयमै सही नक्सा प्रस्तुत गर्नसम्म पनि साहस नगर्ने हो भने हामीले कुनै हालतमा पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फर्काएर खान सक्ने छैनौँ ।
यो जगजाहेर छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो घरबारीको चारकिल्ला समेत यो हो भनेर समयमै तोक्न सक्दैन, उसको चार किल्ला उसको सबल छिमेकीले तोकिदिनेछ र आफूलाई सबैभन्दा ज्यादा लाभ हुने गरी तोकिदिनेछ ।
नेपालसित त्यस्तो अकाट्य तथ्य प्रमाण नभएको पनि होइन । नेपालको भारतसितको सीमाको मुख्य आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो ।
नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधान बाधक !
सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीपारिका सबै जमिनमा नेपालीले आफ्नो अधिकार परित्याग गर्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसको मतलब सिंगै काली नदी र त्योभन्दा वारिको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भनेर सुगौली सन्धिले दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा परिभाषित गरेको छ ।
काली नदी कुन हो भन्नका लागि पनि सुगौली सन्धिताकै तत्कालीन इस्ट इण्डिया सरकारले कोरेका प्रामाणिक नक्सा उपलब्ध छन् ।
यसमा सबैभन्दा मुख्य नक्सा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा करिब ३ महिना अघि (२ जनवरी, १८१६) को नक्सा, सुगौली सन्धिको लगत्तैपछि सन् १८१९ को नक्सा र १ फेब्रुअरी १८२७ को नक्सा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् ।
सुगौली सन्धिको ठीक अघि २ जनवरी, १८१६ को नक्सा बेलायती राजाका हाइड्रोग्राफर स्वयमले कोरेको नक्सा हो । सुगौली सन्धिको लगत्तै पछिको सन् १८१९ र सन् १८२७ को नक्सा इस्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे डिपार्टमेण्ट स्वयमले कोरेको नक्सा हो ।
त्यसैले यी तीन नक्साको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउने कुनै ठाउँ छैन । परन्तु, यी तीनवटै सुगौली सन्धिवरपरका नक्सामा कुटी याङ्दी लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी ठहर गरिएको छ ।
लिपुलेक वा तुलसी न्युराङबाट बगेर आउने खोलाको संकेत नक्सामा छ तर त्यसलाई कुनै नाम नै दिइएको छैन । कार्टोग्राफिक भाषामा यसको तात्पर्य ती गणनायोग्य नदी होइनन्; ती साना खोला मात्र हुन् ।
यी नक्सा पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा काली नदीको वास्तविकताबारे तथ्य सत्य पत्ता लाउन नागरिक स्तरमा गठन भएको ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ले लण्डनस्थित ब्रिटिस लाइब्रेरीको ‘इण्डियन अफिस अफ रेकर्ड कलेक्सन’बाट २०५५ सालमै नेपालमा ल्याएका नक्सा हुन् । यी नक्सा सरकारलाई पनि उपलब्ध गराइसकिएको छ र हामीसित अहिले पनि उपलब्ध छन् ।
खालि यी प्रामाणिक नक्सा मात्र होइन, हामीसित अरु धेरै नक्साहरूसमेत उपलब्ध छन्, जसका आधारमा किटानीका साथ भन्न सकिन्छ कि कुन मितिदेखि भारतले नक्सामार्फत नेपाली भूमिको अतिक्रमण गर्न सुरु गर्‍यो ।
लेखको लम्बाइ ज्यादै लामो र भद्दा नहोस् भनेर यहाँ खालि यति मात्र भनौँ– सन् १८५६ सम्मका सबै भारतीय आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई नै काली नदी भनिएको छ । तर १८६५–६९ र १८७१–७७ देखि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले नै नक्सामार्फत नेपाली भूमिको अतिक्रमण गर्न प्रारम्भ गरेको हो ।
सुगौली सन्धिको लगत्तैपछिको सन् १८२७ को प्रामाणिक नक्सा
नक्सामार्फत भूमि अतिक्रमण गर्न सुरु गरे पनि ब्रिटिस भारत सरकारले अरु थुप्रै आधिकारिक कागजातमा चाहिँ काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा वा कुटीयाङ्दी नै हो भनेर स्वीकार गरेकाे छ ।
त्यसमध्ये एउटा आल्मोरा गजेट हो, जुन त्यतिबेलाको ब्रिटिस भारत सरकारको राजपत्र हो । ‘lAmora–a\_Gazetteer भाग ३५’ नाम दिइएको अलाहवादबाट सन् १९११ मा प्रकाशित त्यस गजेटको पृष्ठ ४ मा भनिएको छ–
'The Kali in the east has its true source in Kuti-Yankti which after the infall of the Kalapani river takes the name of Kali.'
अर्थात्र ‘पूर्वमा काली नदीको वास्तविक मुहान कुटीयाङ्दी हो जुन कालीपानी नदीसित मिसिएपछि कालीको नाम ग्रहण गर्छ ।’
यो गजेटले काली नदीको वास्तविक मुहान कुटीयाङ्दी हो भन्ने स्वीकारेको छ । जगजाहेर छ, कुटीयाङ्दी लिम्पियाधुरामुनिको जलाधार क्षेत्र हो ।
त्यति मात्र होइन, अरु प्रमाणहरूले पनि अहिले कालीपारि रहेका कुटी, नाबी, गुञ्जी, टिंकर, छाङ्गरू, लिपुलेक नेपालको हो भनेर ठहर्‍याउँछन् ।
त्यस्तो एउटा अकाट्य प्रमाण हो– तत्कालीन कम्पनी सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडाैंस्थित ब्रिटिस रेजिडेण्टलाई ४ फेब्रुअरी, १८१७ मा लेखेको निर्देशन पत्र ।
त्यो पत्रको ब्यहोराबाट के थाहा हुन्छ भने त्यो समयमा काली नदी पारिपट्टिको एउटा गाउँबारे चौतरिया बम शाहले सुगौली सन्धिअनुसार त्यो नेपालको गाउँ हो भनेर दाबी गरेका रहेछन् ।
यसमा के गर्ने भनेर सोधिँदा कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले जवाफ दिएका रहेछन्, ‘काली पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना (जसभित्र कुटी, नाबी, गुञ्जी, छाङ्गरू, टिंकर, लिपुलेक पर्दछ) यसअघि भारतको भए पनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले नेपाल सरकारको अधिकारीलाई सुम्पिदिनू ।’
जे. आदमको यो जवाफले तत्कालीन भारतले नावी कुटी, गुञ्जीको पश्चिमपट्टिबाट बहेर आएको नदीलाई काली नदी नै ठहर्‍याएको छ । र, अहिले भारतले कब्जा गरिरहेका ती सबै गाउँलाई नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्रको ठहर्‍याएको छ ।
नेपालसित अहिले पनि बैतडी मालमा रहेको खड्ग निशानासहितको मोठमा त्यस्ता प्रमाण बाँकी छन्, जसका आधारमा भन्न सकिन्छ, २७ मंसिर, १९९७ सम्म पनि नेपालीहरूले छाङ्गरू, टिंकर, बुदी, गब्र्याङ, र नब्याल गाउँको तिरो नेपाली मालमा तिर्दथे ।
अहिले छाङ्गरू र टिङ्कर मात्र नेपालको अधिकार क्षेत्रमा छ । अरुमा सन् १९६२ देखि भारतीय सेना र सशस्त्र प्रहरी आएर बसेको छ । यो मोठले पनि काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा नै हो, भारतले कब्जा गरेको भूमि १९९७ सालसम्म नेपालकै थिए भनेर प्रमाणित गदर्छन् ।
२०१८ सालसम्म भारतबाट अतिक्रमण गरिएका ती भूमि नेपालका थिए भन्ने आधिकारिक प्रमाण पनि नेपालसित छन् ।
२०१५ सालमा ती गाउँमा संसदीय चुनावमा मतदान भएको थियो । २०१८ सालमा ती सबै गाउँमा नेपालको तर्फबाट निर्वाध रूपमा जनगणना भएको थियो ।
जनगणना अधिकृत थिए भैरव रिसाल । जो अझै जीवित हुनुहुन्छ । भैरव रिसालका अनुसार जनगणना गरिँदा ती सबै गाउँमा भारतीय राज्यको उपस्थिति नै थिएन ।
अतः काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने सम्बन्धमा हामीसित भारतले इन्कार गर्नै नसक्ने अकाट्य र आधिकारिक प्रमाणको अभाव छैन ।
नेपाल सरकारसित ती सबै प्रमाणहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्वसामु बेलैमा पोजिसन–पेपर जारी गर्ने साहस र जाँगरको अभाव देखिएको छ ।
सत्य कुरा विश्वसामु राख्यो भने भारत सरकार रिसाउला भनेर नेपाल सरकार त्राहिमाम छ । नेपाल सरकारको यही कमजोरी भारतलाई थाहा छ । र, जति कूटनीतिक नोट पठाए पनि उसले टेरपुच्छर लाएको छैन ।
कसैले दुख्ने गरी झापड हान्न हुने तर दुखाइ ब्यहोर्नेले ‘दुख्यो, यहाँनेर दुख्यो’ भनेर भन्न पनि नहुने तर्क कदापि न्यायसंगत हुन सक्दैन ।
अतः काली नदीको वास्तविक मुहान तथा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका बारेमा सारा विश्वले बुझ्ने भाषामा सारा आधिकारिक प्रमाणसहितको नेपालको ‘पोजिसन पेपर’ प्रकाशन गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।
जब हामी विश्वसामु यस्तो आधिकारिक प्रमाणहरूको दस्तावेज राख्न थाल्छौँ, विश्वको नजरमा भारतको चरम अन्याय खुलस्त हुनेछ । बल्ल उसको बदनामी समेत हुन थाल्नेछ । तब बल्ल भारत सरकार कुटनीतिक वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार हुनेछ ।
कुनै पनि तहको कूटनीतिक वार्ताको टेबुलमा हाम्रो दाबी पनि बलियो हुनेछ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका शहीद भगत सिंहको भनाइ छ– जसको कानले विनम्र आवाज सुन्दैन, उसको कानलाई सुन्ने बनाउन बमको धमाका आवश्यक हुन्छ ।
भारतले हामीलाई उत्तिकै हेपेको होइन, लामो समयेदखि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मौसमी जागरणको स्वभाव बुझेर हेपेको हो । भारतले नक्सा प्रकाशित गर्छ, तब बल्ल नेपाली राजनीतिक नेतृत्व केही छिन उठ्छ । मुद्दा किनारा लाग्न पाएको हुँदैन, फेरि सुतिहाल्छ ।
भारतले फेरि लिपुलेकको सडक उदघाटन गर्छ, सारा नागरिक उठेकाले सरकार पनि केही दिन उठ्छ । फेरि केही दिनपछि सुतिहाल्छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि मुद्दा लगातार उठाइरहन्छ र टुंगो नलागेसम्म जोडदार ढंगले उठाउँछ भनेर भारत सरकारलाई लागेकै छैन ।
यही कारण भारत सरकारले नेपाल सरकारको आवाजलाई कुनै महत्त्व नदिएर हेपेको हो । जुन दिन नेपाल सरकारले भारतले बुझ्ने गरी यो सन्देश दिन सक्छ कि यो मुद्दा अब नेपालले कदापि छोड्नेवाला छैन, विश्वभरि सुनिने गरी उठाउनेछ, भारत सरकारले निश्चय पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको आवाज सुन्न र सम्बाेधन गर्न थाल्नेछ ।
नेपाल सरकारले सिमानामा केवल सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र तैनाथ गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको जुन ३७ हजारको कुल संख्या छ, त्यसबाट नेपाली सिमानामा सघन पहरेदारी हुन सम्भव नै छैन ।
भारतले हरेक ३–४ किलोमिटरमा एउटा सीमा पोस्ट राख्दा नेपालले प्रत्येक १० किलोमिटरमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा सीमा निरीक्षण पोस्ट राख्ने हो भने नेपाली सीमा अतिक्रमण कहिल्यै नटुंगिने प्रक्रियाको रूपमा लगातार भई नै रहनेछ । त्यसैले सीमा अतिक्रमण रोक्नका लागि र नेपाली सीमाको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब नेपाली सेना परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सीमा रक्षा सेनाको मुख्य दायित्व पनि हो ।
यति धेरै सीमा अतिक्रमणका घटना हुँदाहुँदै पनि हामी सेनालाई व्यापार र ठेक्कामा लाउँछौँ, त्यो अन्त्य गरेर सीमा रक्षामा नखटाउने कुरामा जिद्दी गर्छौं भने त्योभन्दा ठूलो भुल केही हुने छैन ।
अहिले छाङ्गरुमा जुन पोस्ट राखिएको छ, त्यहाँ ६ महिनापहिले पनि पोस्ट थियो । तर, चिसो मौसममा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको अभावका कारण त्यो पोस्ट छाङगरुमा रहन सक्दैनथ्यो तल झर्थ्याे । लिम्पियाधुरादेखि छाङ्गरूसम्मका गाउँहरूमा राज्यको लामो समयसम्मको अनुपस्थिति नै भारतीय अतिक्रमणको मुख्य कारण हो ।
नाबी, कुटी, गुञ्जी, गब्र्याङ, लिपुलेक सबै स्थानको सीमा अतिक्रमण यही कारण सम्भव भएका हुन् । अब त्यो भुलबाट पाठ सिक्नुपर्छ । भारतसरह वर्षभरि नै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी नेपाली भूमि र सीमाको सुरक्षाका लागि त्यस सीमाक्षेत्रमा रहन सक्ने प्रबन्ध नगरीकन त्यो क्षेत्रको सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन सम्भव छैन ।
साथै, ती नेपाली गाउँहरूमा जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यो बाध्यता अब अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । सरकारले ती स्थानमा बाटो खन्ने हालै जुन निर्णय गरेको छ, त्यो ज्यादै ढिलो गरी भएको अत्यन्त उचित निर्णय हो ।
भारतले सीमा मिचेको खाली कालापानी क्षेत्रमा मात्र होइन । सुस्तालगायत देशको ७४ भन्दा ज्यादा ठाउँमा उसले सीमा मिचिरहेको छ । त्यसैले जुनसुकै मूल्यमा भए पनि नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनुको कुनै विकल्प छैन । जति हामी यो अपरिहार्य कार्य गर्न ढिलाइ गर्छौँ, नेपाली भूमि निरन्तर घटिरहेको हुनेछ ।
के हेक्कामा राख्न आवश्यक छ भने भारत सरकार भनेको विनयपूर्वक गरिएको आग्रह सुन्ने शक्ति नै होइन । झुकेर र टाङमुनि छिरेर ऊ कहिल्यै तहमा आउँदैन । विश्वको र एसियाको महाशक्ति राष्ट्र हुन तम्सेको उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साखको विशाल नोक्सानीको भाषा मात्र बुझ्दछ ।
विगत तीन–तीन वटा नाकाबन्दीको समयमा पनि ऊ तब मात्र पछि हट्यो, जब उसको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा ठूलो नोक्सानी भयो । ऊ रिसाउँछ कि भनेर हामी डराउने होइन, विगत अनुभवका आधारमा ऊ के गर्दा तहमा आउँछ भनेर हामी दूरदर्शितापूर्ण र युक्तिपूर्ण हुने हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७, १७:०५:००